Echiche kacha mma iji chọọ isi ihe ndina gị mma | Bezzia
Echiche kachasị mma iji chọọ isi ihe ndina gị mma
Ọ bụrụ na ịchọrọ inye ụlọ gị aka dị iche Ma ị maghị otu esi eme ya n'ụzọ dị mfe ka o wee nye gị nsonaazụ kacha mma, ị nwere ike ime ya site na imezi isi nke akwa ahụ.
N’isiokwu a anyị na-agwa gị -esi mee ka gị na ime anya dị iche iche naanị ịmegharị isi ihe ndina gị.
Ime ụlọ bụ otu n'ime oghere ndị dị n'ụlọ ahụ ebe ọ naghị anabata ọtụtụ akụrụngwa. Ihe bụ isi bụ ihe ndina, oche na tebụl, akwa na tebụl akwa. Dabere n'ụdị ụlọ ihi ụra, ọ bụrụ na ọ bụ nwata na-eto eto ọ ga-enwe tebụl, n'aka nke ọzọ, ụlọ ihi ụra mbụ anaghị enwekarị ọtụtụ ihe.
Maka nke a, anyị ga - amata echiche kacha mma iji gbanwee isi ihe ndina gị ma nye ya mmetụ dị iche. N'ihi ya, ka anyị mata ụfọdụ echiche icho mma isi ihe ndina gị ma mee ka ime ụlọ gị bụrụ ebe kachasị amasị gị.
Dabere na akụkụ nke ọnụ ụlọ gị, ịnwere ike ịgbakwunye oche oche ma ọ bụ igbe mpempe akwụkwọ iji jupụta oghere efu ọ bụla, agbanyeghị, ọ gaghị ekwe omume mgbe niile. Nke a bụ ihe kpatara isi ihe ndina ahụ nwere ike were etiti etiti ya wee nye ya aka.
1 Mee ime ụlọ ihi ụra gị ka ọ bụrụ ebe kacha atọ ụtọ
2 Họrọ isi okwu zuru oke maka ihe ndina gị
2.1 Ihe onwunwe
2.2 Boarddị isi
2.4 Na tebụl n'akụkụ akwa
3 Echiche iji chọọ isi ihe ndina gị mma
3.1 Isi ihe nwere okpokolo agba
3.2 Isi ihe eji arụ ọrụ
3.3 Isi ihe na akwụkwọ ahụaja
3.4 Ngwakọta shelf ma ọ bụ shelf
Mee ime ụlọ ihi ụra gị ka ọ bụrụ ebe kacha atọ ụtọ
Ọ dị mkpa ịrahụ ụra na gburugburu ebe obibi dị ụtọ, n'ihi ọtụtụ ebumnuche, mana karịa ihe niile iji rite uru nke izu ike dị mma. Igwe isi nwere ike ịga ogologo oge iji mee ka ime ụlọ ahụ mara mma ma na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na anyị nwere ụlọ na-ekpo ọkụ ma na-enye obi ụtọ, anyị ga-enweta ọtụtụ uru: chee echiche nke ọma, meghachi omume ọsọ ọsọ, melite ebe nchekwa na itinye uche. Sleepra na-ezighi ezi ọ bụghị naanị na-emetụta ọrụ anyị niile n’ahụ, kamakwa ọ na-emebi ndụ ndụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọrụ yana mmekọrịta ezinụlọ.
Ka ụlọ gị nwee ikuku kacha mma ma nwekwaa obi ụtọ dị ka o kwere mee, rịba ama ndụmọdụ ndị a:
Họrọ ndò ndị na-akpali obi iru ala. N'ime ha bụ ụda aja aja na agba ụwa. Osisi na-enye anyị ọtụtụ mma na ọdịiche nke ọma na beige, blues na elu.
Na-ahọrọ maka ọkụ nwere ụda ọbara ọbara na nke na-emetụta ọdịda anyanwụ. Maka nke a, ị ga-eji ọkụ na-enweghị isi na isi isi.
Jiri ihe mkpuchi mee nke ihe nwere textures dị mma dị ka silk ma ọ bụ ajị anụ.
Lezienụ anya karịa n'ihe ndina. N'okwu a, na isi isi, ọ bụ ezie na i kwesịkwara ị attentiona ntị na curvature nke azụ gị na akwa akwa na-adị mfe na owu.
Họrọ isi okwu zuru oke maka ihe ndina gị
Ọ dị mfe ịlafu na eluigwe na ala nke isi. Varietiesdị dị iche iche dị ọtụtụ ma ọtụtụ mara mma nke na anyị ga-anwale ha niile. Mana dika anyi kwuru, anyị ga-ahụrịrị ụdị ụlọ anyị mgbe niile ka ọ ghara ịlụ ọgụ.
N'aka nke ọzọ, ikekwe anyị na-enye nkwekọ dị mkpa karịa ụdị na ụdị mma karịa na arụmọrụ nke isi ahụ. Ha abụọ dịkwa mkpa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ime ụlọ gị dị mma, ma bụrụkwa nke a ga-eji kpoo ya nke ọma site na mkpọtụ, nwere agba mara mma na mgbidi na nkasi obi niile, buru akụkụ ndị a n'uche.
Ọ dị mkpa iburu n'uche ihe eji eme ihe n'ime ụlọ ihi ụra. Dabere na mmasị gị na mmefu ego ha ga-abụ otu ụdị ma ọ bụ ọzọ. Ndị osisi bụ ndị na-enye anyị mmetụta kachasị mma nke okpomọkụ, n'aka nke ọzọ, ị nwere ike iji ihe ndị e ji ígwè mee.
Ọ bụ isi okwu nke bụ akụkụ nke ihe ndina ma ọ bụ nke ị zụrụ iche. Isi na bed nwere ike ọ gaghị abụ otu ma ọ bụ anaghị akwado ibe haOtú ọ dị, ọ nwere ike ịmepụta ezigbo mmetụta ọhụụ.
Ya mere, echegbula ma ọ bụrụ na isi gị na akwa ahụ adịghị, nke ahụ nwere ike ịbụ aka ụlọ ime ụlọ gị chọrọ.
Nwere ike ịhọrọ eriri eke dị ka owu ma ọ bụ linen, n'ihi na mmetụta ha dị ọhụụ. Dị ka na ụda olu ka ị ga-abụ ihe na-adị n'ụdị akwa a.
Ọ bụrụ na ịhọrọ eriri sịntetik, ndị a ga-adị mfe nhicha ma na-eguzogide ọgwụ. N'aka nke ọzọ, ndị nwere ụdị velvet ga-enye ya ọmarịcha ejiji na okomoko. I nwekwara ike ịgbakwunye bọtịnụ, dị ka ụdị bọtịnụ ma ọ bụ studs n'akụkụ.
Na tebụl n'akụkụ akwa
Nwere ike ịhọrọ isi mkpuchi nke nwere ọkụ na tebụl akwa n'akụkụ ya, nke a ga-enye nhazi yana arụmọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ị ga-egbochi ọkụ ọkụ na-ewere ohere na tebụl akwa.
Echiche iji chọọ isi ihe ndina gị mma
Ọzọ, anyị na-agwa gị echiche kacha mma iji chọọ isi ihe ndina gị mma. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta ụdị dị iche n'ime ime ụlọ gị n'ụzọ dị mfe.
Isi ihe nwere okpokolo agba
O bu ezi echiche nke oge a ka a na-eji otutu. Edebe foto, foto ma ọ bụ ihe osise n'ọnọdụ ebe isi ahụ ga-aga, tinye ya na mgbidi. Ihe a ga-elekwasị anya na ihe oyiyi ahụ.
Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ foto nke ọma ka ihe niile wee kwekọọ.
Isi ihe eji arụ ọrụ
Ha bụ ndị magburu onwe nke optimizing oghere ndị kacha. Igwe isi a nwere ebe nchekwa na ebe nchekwa, na-eme ka ha dị mma maka ndị nwere ọtụtụ ụlọ ha. Na mgbakwunye, ha ga-enwe ike ịnwe ihe niile anyị chọrọ n'aka n'oge ahụ anyị zuru ike.
Isi ihe na akwụkwọ ahụaja
Na nke a, ị nwere ike akwụkwọ ahụaja naanị akụkụ nke mgbidi ahụ ga-adaba na isi isi ma ọ bụ mgbidi niile na-akọwa ngalaba isi ya na motif dị iche. N'okwu a, ị nwere ike ịhọrọ akwụkwọ kacha dabara adaba n'ụdị gị Dị ka o kwesịrị, ị nwere ike ịgbanwe ya ọtụtụ oge ịchọrọ ma ọ bụrụhaala na ị kpachara anya mgbe ị na-ewepụ ya.
Ngwakọta shelf ma ọ bụ shelf
I nwekwara ike dochie isi gị na shelf ma ọ bụ shelf ma ọ bụ ọtụtụ iji jee ozi dị ka ebe nchekwa. Nwere ike ime ka a shelf ike n'ime mgbidi ebe foto okpokolo agba, chepụta ihe ma ọ bụ ncheta. Na mgbakwunye, ịnwere ike idunye oriọna ebe ahụ ka ị ghara iji oghere na tebụl akwa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Echiche kachasị mma iji chọọ isi ihe ndina gị mma